N'ogbe Polyurethane High Pressure Drainage Hose Maka Ngwuputa Jiri Onye Nrụpụta na Onye Nrụpụta |JL
Atụmatụ na Oke
ịdị arọ dị arọ, ibu nrụgide dị elu, nrụpụta dị elu, udidi dị nro, ikuku ikuku, ọrụ dị mma, ntinye ngwa ngwa na iwepụ ọsọ, mgbanwe, ike mgbanwe gburugburu ebe obibi, nchekwa, ntụkwasị obi na iji ogologo oge.
enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe maka ịnye mmanụ, ịtọ ahịrị nnyefe nwa oge, ibufe ngwa agha na ciment n'ọhịa nyocha mmanụ, wdg.
Ntinye nke nkwonkwo ọkpọkọ
Agbadoronjikọ ọkpọkọnwere e ji mara nke a pụrụ ịdabere na njikọ, elu nrụgide na-eguzogide, okpomọkụ na-eguzogide, ezi akara na repeatability, adaba echichi na mmezi, nchekwa na a pụrụ ịdabere na ọrụ, wdg Welded ọkpọkọ nkwonkwo mejupụtara atọ akụkụ: nkwonkwo ahụ, ferrule na nut.Mgbe ferrule na nut aka uwe na-ịtinye n'ime nkwonkwo ahụ na ígwè ọkpọkọ na nut na tightened, mpụta akụkụ nke n'ihu njedebe nke ferrule dabara na conical elu nke nkwonkwo ahụ, na n'ime ọnụ evenly ata n'ime. ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara iji mepụta akara dị irè.Ọ nwere njirimara nke nguzogide corrosion, nrụgide nrụgide dị elu, ntinye dị mfe na ịdịte aka.
Nlebara anya maka ntinye nke nkwonkwo ọkpọkọ welded:
1. Na njedebe nke ọkpọkọ ígwè, ihe dị n'ime na n'èzí na-eme ka ọ dị ntakịrị.
2. Nkwadebe nke ọkpọkọ ígwè ga-abụ ihe bara uru na nkenke oyi na-adọrọ adọrọ nchara nchara.
3. Iji hụ na ntinye ntinye nke nkwonkwo ahụ, a ga-ebu ụzọ mee ihe ntinye tupu.
4. Lelee ma ọkpọkọ ígwè ahụ nwere protrusion ma mechaa nhazi nke mbụ.
5. Tinye obere griiz na ferrule ma jide n'aka na etinyeghị ya ọzọ.
6. Ghichaa nut na nkwonkwo ahụ na mgbanaka, na echichi agwụla.
Njikọ ọkpọkọ nke Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd mepụtara bụ nke ọhụrụ imewe, ntinye ngwa ngwa na enweghị nkwụsị.Companylọ ọrụ ahụ na-emekọ nyocha na mmepe teknụzụ, ịnyefe teknụzụ n'ọhịa polymer sooks na thermoplastic composite mesikwuru ọkpọkọ, nhazi, n'ichepụta na ahịa nke ọkara emechara polymer sooks, polymer ntekwasa teepu, polymer soft akpa na thermoplastic mejupụtara mesikwuru ọkpọkọ Imepụta na ire ere, imebe pipeline mmiri dịpụrụ adịpụ na ihe owuwu, nkwonkwo ọkpọkọ, ire akụrụngwa ọkụ;igwe na akụrụngwa n'ichepụta na ịre ahịa, ahịa ngwaahịa rọba na rọba, njikwa onwe ya na onye nnọchi anya ụdị ngwaahịa niile na mbubata na azụmaahịa mbupụ teknụzụ.
Nke gara aga: A na-eji eriri abụba nwere ike ịhazi ya na ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, ihe owuwu, ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Osote: Ọkpụkpụ Polyurethane Nrụgide Dị Elu Eji Na Nnapụta M